Ị chọrọ isonye na March ụwa na-abịa? - World March
Ịchọrọ isonye na March nke ọzọ?
Mbido » Ịchọrọ isonye na March nke ọzọ?
Ụwa March maka Udo na Ngalaba Na-adịghị na Nri bụ otu mmekọrịta nke mmadụ ga-amalite na njem nke abụọ ya na October 2 2019. Emere Mbụ World March na afọ 2009 ma nwee ike ịkwalite Banyere otu puku ihe omume na karịa 400 obodo. Ihe dị mkpa na na World March nke abụọ ịchọrọ ịkwaghachi ma merie.
The World March maka Udo na Nonviolence haziri site iche iche na a ụmụ mmadụ ọhụụ, gbasasịa gburugburu ụwa na a ihe mgbaru ọsọ ike ma na-amụba mmata nke mkpa ọha mmadụ gburugburu ụwa na-ebi n'udo na Nonviolence .
Na nke a, ọ dị oké mkpa na ndị ọhụrụ sonyere isonyere ihe ọhụrụ a. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha ma chọọ ịmatakwu anyị, anyị na-akpọ gị òkù ka ị gaa na weebụ, ịgụ akwụkwọ dị iche iche dị na ya.
Kedu ụdị òkè anyị na-achọ?
Ebe ọ bụ na World March maka Peace na Noviolence, anyị na-emeghe ka ụlọ ọrụ ọ bụla, otu mkpokọta ma ọ bụ onye ọbụla, si n'ebe ọ bụla n'ụwa, chọrọ ka anyị na ndị ọzọ kwadoro ọrụ a. Dịka e kwuru n'elu, njem ahụ ga-amalite 2 nke October nke 2019 wee gaa gburugburu ụwa, mechie March 8 nke 2020.
Site na ihe omuma a anyi choro ka ndi mmadu ma obu ndi mmadu ndi gosiputara n'oru a, sonye n'ememe site n'inwe ihe ndi ozo dika ubochi nke njem a.
Ihe niile a na - eme abụghị ihe na - abaghị uru, ya bụ, ọ dịghị ihe na - akpata akụnụba, ọ ga - emerịrị ya.
Anyị na-achọ ndi mmadu ma obu ndi mmadu kwadoro ihe kpatara ya na ndị chọrọ isonye na ịmepụta usoro nkwurịta okwu kpọmkwem na ndị na-ahazi.
A ga-akwalite mmemme ndị a ga-eme iji zukọta ọnụ ọgụgụ zuru oke (ụmụ ma ọ bụ ndị okenye) ịbụ, ma ọ dịkarịa ala 20 sonyere ezigbo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ isonye, ​​ma ị nweghị echiche nke otu ọrụ, anyị ga-akpọtụrụ gị ka ị tụlee ụfọdụ ihe atụ nke ihe nwere ike ịmalite. Ma, a pụkwara ịkọwapụta ihe ndị ọzọ ma chee echiche nke ọma site n'onye ahụ maka ọrụ ahụ ma ọ bụrụhaala na ha dị n'ime ụkpụrụ nke March.
A ga-agwa gị ka ịhọrọ ụbọchị nke ga-esi 2 site na October site na 2019 ruo 8 site na March nke 2020, iji kọwaa ihe omume a họọrọ ma nke ahụ nwere ike ịbụ akụkụ nke njem ụwa zuru ụwa ọnụ nke na-ewere ọnọdụ. Dabere na ụbọchị anyị kwenyere, ọrụ ahụ ga-abụ akụkụ nke njem ndị njem, ma ọ bụ nwere ike ịbụ akụkụ nke njem nke abụọ.
Mgbe ị debanyere aha ị ga-enweta ozi-e na adreesị ozi-e nke ị kwuru, nke anyị ga-ebido kọntaktị na-enye ozi ndị ọzọ, ma na-agbalị ịnakọta ozi dị mkpa iji rụọ ọrụ ahụ nke ọma.
Ọ dị mkpa mgbe nile ịnwe ihe nkwado ngwa ngwa (foto ma ọ bụ vidiyo), ka ha wee nwee ike ịkekọrịta na weebụ yana na netwọk mmekọrịta nke nzukọ ahụ, si otú ahụ na-ekepụta akụkọ nke ụbọchị akụkọ a.
Kedu otu a ga - esi bụrụ akụkụ nke ije ahụ?
All mmadụ ma ọ bụ na-akpakọrịta na-achọ inwere ime onwe ha ka ike obere ihe ma ọ bụ eme n'oge na ụbọchị-ogologo njem ahụ, na mkpa iji pịa na button ike na-ahapụ gị nkọwa otú anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị via email, otú a ka igbochi mkpa na anyị nwere ike na-atụ aro ụfọdụ echiche maka ihe omume ime.
Chee elu ma sonye na nke a ije!
Hapụ anyị data nsonye gị
Nwa oge nwere nkwarụ ruo mgbe mgbama a na -ewepụta ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ị nwere ike ịkpọtụrụ na info@theworldmarch.org